घर - Forex Lens
मार्केटमा तपाईंको आँखा।
तपाईंको ट्रेडिंग एज खोज्नुहोस्।
शामिल FOREX LENS
हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, र PROFIT एक साथ
भित्र हाम्रो ट्रेडिंग समुदायको साथ
हाम्रो अतुलनीय विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग कोठामा सामेल हुनुहोस्
जहाँ हामी दैनिक लाइभ स्ट्रिम गर्छौं
तपाईंलाई प्रत्यक्ष बजार विश्लेषण प्रदान गर्न
र न्यूयोर्क को समयमा व्यापार विचार
र र/वा लन्डन सत्रहरू।
प्रो ट्रेडर बन्नुहोस्
दैनिक व्यापार विचारहरू
पाउनु प्रत्यक्ष सम्म पहुँच अनुभवी प्राविधिक विश्लेषकहरू प्रश्न र उत्तर को लागी, प्रतिक्रिया मा
व्यापार विचारहरू, र तपाईंलाई लाभदायक व्यापार सेटअपहरू प्रदान गर्दछ
विदेशी मुद्रा, कमोडिटी, इन्डिज र क्रिप्टो बजारहरूमा।
व्यापार विचार प्राप्त गर्नुहोस्!
400+ घण्टा भिडियोहरूको शैक्षिक पुस्तकालयमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्।
हामी व्यापारीहरूलाई उनीहरूको व्यापारमा वास्तविक किनारा दिन बलियो व्यापारिक रणनीतिहरू सिकाउँछौं।
प्रो सदस्यता मूल्य निर्धारण
सीमित समय प्रस्ताव - गर्मी विशेष!
हामी एकदमै नयाँ भएका जो कोहीलाई $76 क्रेडिट प्रदान गर्नेछौं Forex Lens। तपाईंले साइन अप गरेपछि र आफ्नो प्रो ट्रेडर सदस्यतामा आवेदन गरेपछि क्रेडिट स्वचालित रूपमा तपाईंको खातामा दिइनेछ। आज एक प्रो ट्रेडर बन्नुहोस् र तपाइँको पहिलो महिनामा मात्र $ 34 मा विदेशी मुद्रा कसरी व्यापार गर्ने सिक्नुहोस्, जुनसुकै बेला रद्द गर्नुहोस्।
हाम्रो Discord सर्भरमा सामेल हुनुहोस्!
एक वास्तविक व्यापार समुदाय
तिमी नै हो जसलाई तिमीले घेरेको छौ। सक्रिय व्यापारीहरूको समुदायमा सामेल हुनुहोस् र अनुभवी पेशेवरहरूबाट सिक्नुहोस्। हाम्रो दैनिक प्रत्यक्ष प्राविधिक विश्लेषण भिडियोहरू पछ्याएर आफ्नो कौशलतालाई अर्को स्तरमा लैजानुहोस्।
दैनिक प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरू & बजार विश्लेषण
हरेक दिन नयाँ भिडियोहरूले तपाईंलाई विदेशी मुद्रा, वस्तुहरू, सूचकांकहरू र क्रिप्टो बजारहरूमा वास्तविक समय बजार विश्लेषण प्रदान गर्दछ। कुनै पनि सम्पत्तिको चार्ट विश्लेषण अनुरोध गर्नुहोस् र हाम्रा पेशेवरहरूबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहोस्।
लाभदायक ट्रेड विचारहरू & सेटअपहरू
हाम्रा प्राविधिक विश्लेषकहरूले तपाईंलाई स्मार्ट मनी, र आपूर्ति र माग व्यापार रणनीतिहरू प्रयोग गरेर उच्च सम्भाव्यता व्यापार विचारहरू प्रदान गर्छन्। यसले तपाईंलाई दिशात्मक पूर्वाग्रह, प्रविष्टिहरू र निकासहरू, र जोखिम व्यवस्थापनमा मद्दत गर्नेछ।
मूल्य कार्य शुक्रबार दिउँसो धेरै सर्छ, र सामान्यतया...
मार्च 4, 2022/by Forex Lens समाचार
आजको प्रत्यक्ष सत्रमा धेरैका लागि व्यापार सेटअपहरू छलफल गरियो ...
मार्च 3, 2022/by Forex Lens समाचार
नाफा लिने ! व्यापारको अर्को दिन सुरु गर्ने कस्तो राम्रो तरिका।…
मार्च 2, 2022/by Forex Lens समाचार
आज बिहान प्रत्यक्ष बजार अपडेट छलफलहरूले कभर कसरी बजारहरू…
मार्च 1, 2022/by Forex Lens समाचार
धेरै प्रमुख मुद्राको लागि इष्टतम व्यापार प्रविष्टि समीक्षा गरिएको थियो ...
फेब्रुअरी 28, 2022/by Forex Lens समाचार
बिटकोइन विश्लेषण हिजो देखि सरेको छ। बजारले अस्वीकार गरेको…
फेब्रुअरी 25, 2022/by Forex Lens समाचार
रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्‍यो, र हामीले त्यसमा भएका तरंग प्रभावहरू कभर गर्यौं ...
फेब्रुअरी 24, 2022/by Forex Lens समाचार
आजको लाइभ समयमा व्यापार सेटअप अवसरहरू अन्वेषण गरियो...
फेब्रुअरी 23, 2022/by Forex Lens समाचार
Altcoin नाफा हाम्रो छोटो स्थिति को लागी जारी छ जबकि BTC र ...
फेब्रुअरी 22, 2022/by Forex Lens समाचार
मूल्य कार्य आज बिहानको न्यूयोर्क लाइभको समयमा विश्लेषण गरिएको थियो ...
फेब्रुअरी 21, 2022/by Forex Lens समाचार
डलर लागत औसत - सबैले यसको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्, तर किन ...
फेब्रुअरी 18, 2022/by Forex Lens समाचार
बजारमा रहेको अनिश्चितताका कारण अहिलेको लागि व्यापार जोखिम घटाउनुहोस्।…
फेब्रुअरी 17, 2022/by Forex Lens समाचार
तपाईको योजनामा ​​के छ
हामी तपाईंलाई सिकाउँदछौं कि तपाईं कसरी सक्नुहुन्छ
तपाईंको ट्रेडिंगलाई अर्को स्तरमा लैजानुहोस्
सिक्नुहोस् कसरी आज एक अधिक लाभदायक व्यापारी बन्न
स्मार्ट पैसाको रहस्य जान्न चाहनुहुन्छ?
At Forex Lensहामी तिमीलाई सपना र वाचा बेच्दैनौं, हामी तिमीलाई बेच्छौं परिणामहरू. Forex Lens व्यापारीहरूका लागि व्यापारीहरूद्वारा निर्मित संस्थागत विदेशी मुद्रा व्यापार सेवा हो। जीवनको लागि चार्टहरू विश्लेषण गर्ने हामी जस्ता व्यापारीहरूलाई भरपर्दो सेवा चाहिन्छ Forex Lens उनीहरूको निर्णय प्रक्रियालाई अनुकूलन गर्न। (के ट्रेड आइडिया लिने, कति पूँजी जोखिम लिने, कसरी ट्रेड व्यवस्थापन गर्ने, कहिले ट्रेडबाट बाहिरिने आदि) आउनुहोस्। तपाईको लागि आधारभूत कार्य गर्नुहोस् र तपाईले गर्नुपर्ने भनेको कार्यान्वयन हो। यहाँ हाम्रो Discord सर्भरमा सामेल हुनुहोस्
तपाईंको ट्रेडिंग सीपहरू पूर्ण नयाँ स्तरमा लैजानुहोस्। हाम्रो जाँच गर्नुहोस् ...
अप्रिल 2, 2021/forexlens द्वारा
यदि चिसो समुद्रले कहिले पनि कुशल नाविक बनाउन सकेन, त्यसपछि चिल्लो बजार…
जनवरी 13, 2021/forexlens द्वारा
यदि सोच्न लगाउँछ कि मा निर्देशित छ जुन मा, तब हामी छ…
नोभेम्बर 3, 2020/forexlens द्वारा
महान एलन वाट्स एक पटक भन्यो रूपमा:
यो वास्तविक रहस्य हो ...
अक्टोबर 14, 2020/forexlens द्वारा
"म मूल्या can't्कन गर्न सक्दिन Forex Lens पर्याप्त उच्च! शानदार सेवा, जहिले पनि त्यहाँ यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्न छ र तपाईंले विशेषज्ञ सल्लाह प्राप्त गर्नुभयो भने! बजार को महान विश्लेषण! मद्दत र सल्लाह अनुसरण पक्कै धेरै अधिक ज्ञानवान। अधिक ज्ञान प्राप्त गर्न र विदेशी मुद्रा मा एक व्यापारी बन्न चाहने जो कोहीलाई सिफारिस गर्दछ। ”(२०२१)
जे एचप्रो ट्रेडर सदस्य
"धन्यवाद संस्थान ट्रेडर। तपाईं सब भन्दा राम्रो व्यापारी हुनुहुन्छ जुन मैले अहिलेसम्म सामना गरें, तपाईको दक्षताको कारणले मात्र होईन तर तपाईंको विद्यार्थीहरूलाई समर्पणको कारण। ” (२०२०)
शिरवान एसप्रो ट्रेडर सदस्य
"मैले हजारौं डलर खर्च गरेको छु, गत बर्षमा राम्रो फोरेक्स संकेत सेवा प्रदायक भेट्टाउँदै। यो धेरै जोडीहरूको राम्रोसँग राम्रो छ कि हुनसक्छ म दिईएको समयलाई हेरिरहेको छैन, र यो प्रत्येक पटक राम्रो छ, जब म व्यापार संकेतहरूको एक जस्तै समान व्यापारमा छु। किसिमले पुष्टि गर्छु जुन म सोच्दै छु। ”(२०१ 2017)
जेफ डब्ल्यू।प्रो ट्रेडर सदस्य
" अनुभव माया गर्दै र यो सबै कसरी पारदर्शी छ। प्रतिभा र ज्ञान साझेदारीको राम्रो संयोजन। राम्रोसँग नियन्त्रण गरिएको। काम जस्तै। मान्छे राख्नुहोस्! ”(२०२०)
कौशल जी।प्रो ट्रेडर सदस्य
"हरेक पैसाको लायक। म तिनीहरूको व्यापारिक कोठामा सामेल हुँदा व्यापारमा एकदमै नयाँ थिएँ। म क्रिप्टोको लागि पनि मूल्य कार्य रणनीति प्रयोग गर्छु र यो धेरै प्रभावकारी छ। म अत्यधिक सिफारिस गर्दछु Forex Lens कसैलाई मात्र व्यापार मा सुरू गरिरहेको। यस्तो लाग्दछ कि उनीहरूसँग अहिले धेरै उन्नत चीजहरू छन् र असन्तुष्टमा धेरै राम्रो व्यापारीहरू छन् जुन उत्तम छ। म मेरो सफलताको उनीहरूलाई श्रेय दिन्छु! ”(२०२०)
डोरिस बीप्रो ट्रेडर सदस्य
A बाट Z मा विदेशी मुद्रा कसरी व्यापार गर्ने जान्नुहोस्
विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग शिक्षा
कसरी Forex संकेतहरू सही तरिका प्रयोग गर्ने
मार्च 18, 2020/ओप एड द्वारा
फेब्रुअरी 21, 2020/forexlens द्वारा
ट्रेडहरू कार्यान्वयन गर्न सहि ब्रोकर पत्ता लगाउँदै
फेब्रुअरी 14, 2020/forexlens द्वारा
ट्रेडिंग मन्टर प्राप्त गर्दै
फेब्रुअरी 10, 2020/forexlens द्वारा
फेब्रुअरी 6, 2020/forexlens द्वारा
डे ट्रेडि intoमा कसरी पुग्ने
फेब्रुअरी 3, 2020/ओप एड द्वारा
तपाईंको पॉकेटमा टेक्निकल एनालिस्ट
हाम्रो प्राविधिक विश्लेषकहरूको अनुभव लिनुहोस् र तपाईंको शिक्षा द्रुत ट्र्याक गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई कसरी देखाउँदछौं कि तपाईं कसरी ट्रेडिंग फोरेक्स मार्फत हाम्रो ट्रेडिंग रणनीति र जोखिम व्यवस्थापनको साथ स्थिर आयको स्रोत सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
चार्टहरूमा समय बचत गर्नुहोस्!
राम्रो ट्रेड सेटअपहरूको लागि चार्ट शिकारको विश्लेषणमा असंख्य घण्टा बचत गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई विश्लेषण गर्न को लागी लाभदायक व्यापार विचारहरु भेट्छौं। तपाइँको समय फिर्ता पाउनुहोस्। वित्तीय स्वतन्त्रता महान छ, तर समय स्वतन्त्रता सबै कुरा हो।
अधिक व्यापार विचारहरू - र कमको लागि!
तपाईंको व्यापारमा मद्दत गर्न 1 मात्र होइन, तर विभिन्न व्यापारिक रणनीतिहरू (जस्तै स्मार्ट मनी) भएका धेरै प्राविधिक विश्लेषकहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् — र धेरै कममा!
हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस् र एक साथ लाभ
पूर्ण मार्केट विश्लेषण ब्रेकडाउन, व्यापार विचारहरू, Q&A सत्रहरूको साथ - दैनिक! हामी सिकाउने कार्यपद्धतीहरूको साथ कसरी व्यापारमा वास्तविक किनारा विकास गर्ने सिक्नुहोस्। एकपटक तपाईं प्रो ट्रेडर बन्ने बित्तिकै तपाईं अधिक अनुशासित र राम्रा गोला व्यापारी बन्नुहुनेछ!
जोखिम मुक्त वातावरणमा सिक्नुहोस्
जोखिम मुक्त ट्रेडि environment वातावरणमा ट्रेडिंग डेमो शुरू गर्नुहोस् जब तपाईं सिक्नुहुन्छ। तपाईं वास्तविक पैसा गुमाउनु पर्ने चिन्ता बिना तपाईंको ट्रेडिंग सीपलाई सान पार्न सक्नुहुन्छ। ट्रेडिंग स्किलसेट हो जुन तपाईंलाई जीवनको लागि तिर्न सक्छ।
सर्वश्रेष्ठ ग्राहक समर्थन टीम
हाम्रो टीमसँग कुनै पनि समयमा कुराकानी गर्नुहोस् त्याग वा हामीलाई तपाईंको प्रश्नहरू, प्रतिक्रिया र चिन्ताको साथ ईमेल गर्नुहोस् [ईमेल सुरक्षित]। हामी यहाँ छौं तपाइँको व्यापार यात्रा को लागी मद्दत गर्न।
हामीले विदेशी मुद्रा बजारमा के देख्छौं दैनिक सारांशहरू प्राप्त गर्नुहोस्
मूल्य कार्य विश्लेषण + EURUSD सुपर बियरिश हो
व्यापार सेटअप + स्वस्थ व्यापार लाभ
नाफा लिँदै + धेरै मुख्य लक्ष्यहरू पुगे
लाइभ मार्केट अपडेट + NZDUSD र AUDUSD बिक्री परिदृश्यहरू
इष्टतम व्यापार प्रविष्टि + BTC र ETH छोटो अवधि ट्रेडिंग रणनीतिहरू
Bitcoin विश्लेषण अद्यावधिक + लाभ मा EURGBP
रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्‍यो + USOIL हाम्रो लक्ष्य उच्चमा पुग्यो
व्यापार सेटअप + Scalping अवसरहरू
Altcoin लाभ + AUDUSD मा राम्रो बिक्री प्रविष्टि
मूल्य कार्य + USOIL सेटअप साझा गरियो
डलर लागत औसत: कसरी प्रारम्भिक किन्न र आफ्नो लाभ राख्न
व्यापार जोखिम कम गर्नुहोस् + BTC र ETH रणनीतिहरू
1 पृष्ठ 52123>»
1 पृष्ठ 208123>»
आज हाम्रो समुदायमा Discord मा सामेल हुनुहोस् र हाम्रा व्यापारीहरू र अन्य सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्! #फोरेक्स लेन्स https://t.co/2RRYlrnJYH
- Forex Lens (OreForexLens) अप्रिल 9, 2020